Monday February 04, 2019 - 11:45:08 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay iyo dad goobjoogeyaal ah ayaa SomaliMeMo u sheegay in qaraxan uu ka dhacay Goob lagu magacaabo ‘Baar Banaadir’ uu ku taalla agagaarka xarunta maamulka gobolka Banaadir, halkaas oo ay joogeen Saraakiil iyo shaqaale katirsan DF-ka.
Sarkaal ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo lahadlay Idaacadda Andalus ayaa sheegay in qaraxa lala eegtay isku imaatin ay ku sugnaayeen Saraakiil katirsan Maamulka gobolka Banaadir, kuwa Nabad-sugida, iyo qaar ka mid ah shaqaalaha DF Soomaaliya.
Warar hordhac ah oo aan helnay ayaa xaqiijinaya dhimashada ugu yaraan 8 xubnood oo ka tirsan DF iyo dhaawaca tiro intaas ka badan waxaana suuragal in khasaaruhu uu intaas ka sii bato.
Qaraxan ayaa imaanaya iyadoo todobaadkii hore sidaan oo kale qarax xoogan oo loo adeegsaday gaari lagasoo buuxiyay walxaha qarxa loolala eegtay goob lagu magacaabo ‘Baar Itaaliya’ oo ku taalla agagaarka xabsiga Godka Jilacow, halkaas oo lagu dilay 7 sarkaal oo uu ku jiray taliyihii hore ee xabsigaasi.
Xarakada Al-Shabaab ayaa todobaadyadan xoojiysay weerarada qorsheysan ee lagu beegsanayo bartilmaameedyada ku yaalla degmooyinka iyo xaafadaha aadka loo ilaaliyo amnigooda ee ku yaalla hareeraha madaxtooyada Villa Somalia ee magaalada Muqdisho.